Mpịakọta PCB Assembly - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
PCBFuture bụ ọkachamara na ọrụ ọrụ PCB dị obere na ọrụ mkpokọta Mpịakọta nwere ọrụ ahaziri iche. Anyị na-onwem na elu n'ichepụta ụlọ ọrụ maka ala na-n'etiti olu omenala PCB nzukọ. Ma anyị nwere ọtụtụ nzukọ edoghi nke nwere ike mfe ịgbanwe ma gbanwee dị ka electronic ngwaahịa chọrọ na nkọwa na a mkpumkpu oge.
Anyị na-elekọta ndị niile PCB nzukọ si PCB n'ichepụta, mmiri ị nweta, SMT nzukọ, site onu nzukọ, ule na nnyefe. N'ịbụ a na-eduga electronic nzukọ emeputa àjà olu PCB nzukọ ọrụ, anyị na-emesi obi ike na gị ngwaahịa bụ kpam kpam n'ihe ize ndụ free na ala na-eri.
PCBFuture’s Ike na Mpịakọta PCB Mpịakọta
Anyị bụ ndị ọkachamara na ndị na-ahụ maka ọgbakọ sekit na ụlọ ọrụ na-enye ndị na-arụ ọrụ ọgbakọ sekit na-arụ ọrụ. Ndị ọkachamara anyị nwere ahụmahụ na-enyere PCBFuture aka ịnye ndị ahịa anyị mgbakọ ndị kachasị adabara dị ka atụ anya maka ngwa ha.
• Imewe maka Ule (DFT)
• Kere maka n'ichepụta (DFM)
• Nzukọ BGA
• SMT gbakọta ngwongwo ngwongwo site na 0402 ka mma QFP mara mma
• Nzukọ RoHS na-ekwenye ekwenye
• Site oghere PCB nzukọ soldering
• Aka PCB soldering ọrụ
• Idu-free PCB mgbakọ
• nkenke akụrụngwa ụzọ akpụ
• Usoro adịghị ọcha nke ọma
Uru maka anyị Mpịakọta PCB Assembly:
• All anyị iferi biri ebi circuit mbadamba bụ 100% ule (E-ule, Solderability ule, FQC na wdg).
• Multiple nzukọ edoghi izute kasị achọ nke ndị ahịa chọrọ.
• Nye prototype PCB nzukọ ọrụ maka ule tupu uka mmepụta.
• Malite uka mmepụta mgbe ahịa gafere niile ule ma ọ bụ na-enye oge nke abụọ prototype PCB nzukọ mmepụta.
• Na-eduzi nyocha AOI na nyocha ọhụụ na usoro mgbakọ PCB niile.
• Iji nyocha X-ray na BGA na nchịkọta ndị ọzọ dị mgbagwoju anya.
• ma ọ bụrụ na mgbakọ ọ bụla achọtara, ndị injinia anyị nwere ahụmahụ nwere ike idozi ha tupu ha ebubata ya.
• Anyị nwere ahụmahụ nke ukwuu otu idozi niile nzukọ mbipụta na ụgbọ mmiri àgwà bi PCBs gị na oge.
Anyị nwere obi ike na ị na-enye gị ihe kasị mma Nchikota n'aka-isi PCB nzukọ ọrụ, àgwà, price na nnyefe oge gị Obere ogbe olu PCB nzukọ iji na Mid ogbe Volume PCB nzukọ iji.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ezigbo PCB nzukọ emeputa, biko zitere gị BOM faịlụ na PCB faịlụ sales@pcbfuture.com . Faịlụ gị niile nwere nnukwu nzuzo. Anyị ga-ezitere gị otu ziri ezi see okwu na-edu ndú oge na 48 awa.